Amabinzana akhuthazayo okuqhubeka ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuba ungomnye wabantu abathanda ukufunda nokwabelana amabinzana enkuthazo yokuqhubeka, iphefumlelwe yimiyalezo ekhuthazayo, ke ndiyacebisa ukuba uqhubeke nokufunda eli nqaku, njengoko siza kukubonisa amanye amabinzana onokuthi uwasebenzise ebomini bakho, kwaye wabelane nabanye abantu, ukusasaza okuhle kwimpilo yabanye.
Yazi awona mabinzana akhuthazayo okuqhubela phambili ekufuneka ubonakalisile mihla le.
1 Amabinzana enkuthazo yokuqhubela phambili ekufuneka uyazi
1.1 Amabinzana okukhuthaza ukoyisa imiqobo
1.2 Amabinzana okukhuthaza ukwenza phambi kwabantu abafuna ukusibona kakubi
1.3 Amabinzana akhuthazayo okuqhubeka
Amabinzana enkuthazo yokuqhubela phambili ekufuneka uyazi
Kukho amaxesha apho umoya wethu uyehla, siziva silusizi, siphoxekile okanye sidanile, eyona nto sinokuyenza ngala maxesha kukuzikhuthaza kwaye yeyiphi indlela engcono yokwenza ngaphandle kokufunda amabinzana enkuthazo yokuqhubeka, esinokwabelana ngayo nosapho lwethu okanye nabahlobo. Ngokwenzululwazi kuye kwafakazelwa ukuba ukubonakalisa imiyalezo yenkuthazo kunefuthe elihle ebantwini, ngakumbi kwabo bahamba ngamaxesha osizi okanye ukubola.
Uninzi lweengqondo zenze izifundo ngokubhekisele kwimpembelelo anayo la mabinzana akhuthazayo okanye akhuthazayo ebantwini, bagqiba kwelokuba amagama ngokwawo anamandla, kuba anefuthe elihle ngokuhlaziya abafundi okanye abaphulaphuli bamabinzana ngamandla, ebavumela ukuba benze imisebenzi, yenza izigqibo okanye woyise ubunzima ngenkalipho enkulu.
Sonke sihamba ngamahla ndenyuka, enye yezona ndlela zisebenzayo xa sizifumana sikule meko kukubhala phantsi kumaphepha ahlukeneyo amabinzana enkuthazo yokuqhubeka Kwaye emva koko zibeke naphi na apho zinokubonwa ngokulula khona, ukuze xa ujikeleza ikhaya lakho okanye indawo yokusebenzela ungasoloko uzijongile, uzimamele, kwaye uzonwabise.
Injongo yala mabinzana kukuthobela inkqubo yeNeurolinguistic Programming, eyaziwa njenge-NLP, apho amandla elizwi aqinisekiswa khona, ngokwenziwa kwezinto eziyinyani, ukongeza ekusebenzeni njengesikhokelo sabantu abanqwenela ukufezekisa Iinjongo ebomini kwaye ziphantsi kancinci, ukubakhuthaza kwaye uqhubeke namaphupha abo.
Ukuba uyalithanda eli nqaku, mhlawumbi kunokuba ngumdla kuwe ukwazi ngakumbi nge Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus ngemali. Apha ngezantsi siza kukubonisa iindidi ezahlukeneyo ze amabinzana enkuthazo yokuqhubeka.
Sukuma de ubone amaphupha akho ezaliseka.
Amabinzana okukhuthaza ukoyisa imiqobo
Uthando luyakwazi ukutshabalalisa iindonga, ngelixa ukuphoxeka kubaphakamisa ngakumbi, kodwa hlala ukhumbula ukuba kwindawo ethile kolo donga, kuhlala kukho umnyango ovulekileyo wethemba.
Lwela amaphupha akho kunye neenjongo zakho, ayizizo zonke iindlela ezizele ziiroses, uninzi luzele ngameva.
Obu bomi abukho ngokuhlala usoyisa, malunga nokuba nesibindi kwaye ungaze unikezele.
Amaphupha ethu akufuneki awe okanye ahlehliswe, into ekufuneka siyenzile kukuphepha yonke imiqobo esiza kuthi, de sifikelele kwinjongo.
Kwimeko apho ufuna ukujonga ngasemva, mayibe kuphela ukubona ukuba kude kangakanani.
Imiqobo ebonakala ebomini bakho ikwenza ube namandla omntu ngalo lonke ixesha woyisa.
Guqula udonga ngalunye lobomi bakho lube linyathelo elikunceda ufezekise iinjongo zakho.
Amabinzana okukhuthaza ukwenza phambi kwabantu abafuna ukusibona kakubi
Ithemba yinto yokugqibela ophulukene nayo kwaye yinto ekungekho mntu unokukuhlutha yona, ndiyathemba ukuba ngomso kuzakubangcono kunanamhlanje.
Esona sixhobo silungileyo ngokuchasene nabantu abafuna ukonwabela iinyembezi zakho luncumo lwakho, yisebenzise.
Ukuthunyelwa kwabantu kunokuthetha into enye kuphela, ukuba bacinga ukuba ungcono kunabo.
Olona lonwabo lukhulu kukuphumeza oko abanye bathi ngekhe ukwenze.
Ukuba ufuna ukulila, yenze, ngelinye ixesha uza kuhleka kule nto ukuyo ngoku.
Uninzi lwabantu aluzixabisi izinto abanazo de baphulukane nazo, yiyo loo nto kufuneka senze izinto ngaphambi kokuba ibe sisikhumbuzo sento onqwenela ukuba ungayenza.
Yonke imihla yobomi bakho mayibe liphepha lencwadi, hayi uyilo, kuba ngekhe wazi ukuba uza kuba nexesha lokuyichitha icocekile.
Xa ufuna into eninzi kwaye awunakuyeka ukucinga ngayo, sukuma de uyifumane.
Izinto ezilungileyo zihlala zenzeka kwabo bakwaziyo ukulinda, kodwa ezona zinto zilungileyo zenzeka kwabo baya ngqo kubo.
Asigugi xa ulusu lushwabene, kodwa xa silishiya iphupha lethu sibeka bucala ithemba.
Zilwele ngokwakho, ukuba ungubani kwaye ungubani.
Thatha umceli mngeni ngamnye kunye nemimoya elungileyo, ukuba uyawoyisa, uya kuziva unelunda kwaye ukuba awuphumelelanga, uya kufunda into ekufuneka uyenzile xa uzama kwakhona.
Soloko ugcina ibunzi lakho liphezulu, abo bajonge phantsi kungenxa yokuba boyika ukuwa.
Uloyiko oluncinci kunye nesibindi. Iinyembezi ezincinci kunye nokholo olungakumbi. Ukuzithoba okuncinci kuwe kwaye uthembele ngakumbi kuThixo.
Xa ufunda ukuyeka lonke uloyiko lwakho, uya kwenza indlela yokufumana into oyifunayo ukufezekisa amaphupha akho.
Akufanele ujonge ngasemva ukubuza ukuba kutheni? Kufuneka ujonge phambili kwaye uzibuze ukuba kutheni kungenjalo?
Khumbula ukuba sonke sikwazile ukwakha emva kokushiyeka singamabhodlo.
Ubomi lithuba, zincede kulo. Ubomi buhle, buxabise. Ubomi liphupha, yenzeke. Ubomi ngumceli mngeni, uphumelele, uBomi ngumdlalo, uwudlale.
Ungalahl 'ithemba xa uphoswa lithuba okanye usilele ukuzama, gcinani engqondweni ukuba ubomi buqala ngokutsha yonke imizuzu emihlanu.
Ukuba sandisa uvuyo lwethu ngaphezu kweengxaki zethu, singonwaba ngakumbi.
Zama ukugxila kwicala elihle lezinto ukuze ube ngcono yonke imihla, endaweni yokujonga kwicala elibi lezinto ongenakukwazi ukuzenza.
Ukungaphumeleli akubenzi abantu babe buthathaka, njengoko kunika amava kwaye komeleza iintliziyo zabo bazibona bebuthathaka kakhulu ukuba bangaqhubekeka.